BWC011 - OMG WIFI / GPS / 4G Body Worn Camera (Hot Swap Battery) - Vahaolana OMG
Ny fakan-tsary dia ireo fitaovana azo entina mandefa horonantsary sy feo. Ireo fitaovana koa dia afaka mandefa horonantsary sy horonantsary mivantana amin'ny alàlan'ny 3G na 4G, manao fanarahana mivantana amin'ny GPS. Ireo fitaovana dia manana monitor TFT sy bokotra eo aminy ary afaka miasa mora foana ilay mpampiasa. Matetika ampiasain'ny lehilahy polisy, mpiambina ary mpitandro ny filaminana hafa ny fakantsary.
Ny fitaovana dia amin'ny haben'ny kompile ary mety amin'ny fampiasana portable.
- Afaka mahazo horonan-tsary sy horonantsary mivantana amin'ny alàlan'ny 3G, 4G na WiFi ny mpampiasa.
- Ny mpampiasa dia afaka mahazo ny fanarahana mivantana ny fitaovana amin'ny alàlan'ny GPS namboarina ao amin'ilay fitaovana. Ny data GPS koa dia hosoratana ao anaty rakitra rakitra miaraka amina feo sy horonan-tsary, mba hahafahan'ny mpampiasa mahazo ny mombamomba ny toerana ao amin'ilay rakitra firaketana.
- Mampiasà bateria lithium ho an'ny famatsiana herinaratra. Ny fitaovana dia mety mandrakitra an-tsoratra mandritra ny 12 ora miaraka amin'ny bateria 2.
- Toerana fitehirizana 32G namboarina. (64G ~ 128G habaka fitahirizana tsy voatery）
- Kamera fakantsary 4 tapitrisa pixel natsangana, fandraketana fanohanana amin'ny vahaolana 1080P, 720P na D1, fanohanana maka sary miaraka amin'ny 40 tapitrisa teboka, 32 tapitrisa teboka ary 2 tapitrisa teboka.
- Tohano IR. Tohano ny fandraketana amin'ny alina.
- Ny anaran'ny rakitra dia manana fampahalalana momba ny daty, ora, karazana firaketana, izay manamora ny fikarohana sy ny rakitra.
- Ny mpampiasa dia afaka mitrandraka, mitady ary mamerina ny fisie eo amin'ilay fitaovana.
- Tohano ny bokotra fikorontanana. Ny alarm alarm button dia azo alefa any amin'ny foibe fanaraha-maso amin'ny alàlan'ny 3G / 4G.
- Ny encryption firaketana dia mahatonga ny porofo ho azo antoka kokoa.
- Ny fitaovana dia afaka mampiseho ny ID ny fitaovana, ny ID an'ny mpampiasa, ny daty ary ny ora.
- Ny fitaovana dia afaka mampiseho fampahalalana momba ny fampiasana bateria, ny toeran'ny famandrihana, ny fotoana sy ny toeran'ny fitadidiana. Ny fitaovana dia manana tondro maivana ho an'ny herinaratra, fandraisam-peo na horonam-peo. Ny jiro maitso dia manondro ny herin'ny, ny jiro mena dia manondro ny fandraisam-peo, ny jiro mavo dia manondro ny fandraisam-peo
- Ny fitaovana dia afaka mitatitra fanairana hetsika, ao anatin'izany ny fanairana ho an'ny bateria mihodina ambany, tsy dia ampy ny fahatsiarovan-toerana sns.
- Manana rakitra log ny fitaovana. Fitaovana misy hetsi-kazo izay misy herinaratra on / off, fandraisam-peo, fandraisam-peo, fakana sary, raikitra ny GPS, fifandraisana 3G / 4G, ary fifandraisana WiFi.
Fotoana fandrarahana: <8 s
Fampidirana horonantsary: 1x Digital Camera amin'ny raki-peo 1080p / 720p / 360p, misy amin'ny fakantsary ivelany
Famoahana horonantsary: 2 inch LCD screen
Famoahana fandraisam-peo: 1920×1080/1280×720/640×360
Raki-tsary: 30 fps @ 1080p
Fomba firaketana: Raketo an-tsary sy video amin'ny fotoana iray ihany
famatrarana: H.264 (High profil up to level 4.1)
Fanamafisam-peo: Ny inputN XXXX MIC, fanohanana fifandraisana amin'ny USB
Fandraisana an-tsoratra: Tohano ny fandraisam-peo
Fanapahana horonantsary mivantana: 1920×1080/1280×720/640×360
sary: 1920 × 1080 ～ 8640 × 4752
anatn'ny: Toham-pananganana nandritra ny fandraisam-peo (foton-tsary fametrahana sary ao anaty horonantsary)
Storage: Namboarina tamin'ny karatra SD 32GB (azo alaina amin'ny 32 ～ 128GB)
Jiro tselatra: Mba hampitomboana ny hamirapiratra rehefa misoratra na mandray sary ianao
Laser: Hamafiso ny fomba fijerinao
IR: Hatramin'ny 10 Meter miaraka amin'ny endrika endrika endrika amin'ny alina
Miresaka indray: Manohana radio roa amin'ny fitaovana samihafa (afa-tsy amin'ny fitaovana 4G / 3G ihany)
Miresaka miverina eo amin'ny lampihazo: Manohana radio roa eo anelanelan'ny fitaovana sy ny sehatra (afa-tsy amin'ny fitaovana 4G / 3G ihany)
Ny zoro an'ny Lens: > 125 °
Fampidirana fanairana: Ny fanohanana ny fampidirana fanairana sy ny fanairana dia azo aseho amin'ny sehatra
USB: 1x USB, amin'ny famandrihana, fifandraisana amin'ny PC, fanavaozana OS, mifampitohy camera camera etc
3G / 4G: Azo alaina ihany, natsangana tao amin'ny modely 3G / 4G (LTE FDD / LTE TDD / WCDMA / TD-SCDMA / GSM / CDMA EVDO / CDMA 1x.
Wifi: Fanampiana, manohana ny fifandraisana WIFI ary AP
GPS: Kitendry ho an'ny BDS / GPS / GLONASS, hanoratana ny toerana sy haingana
OSD: Asehoy sy tehirizo ny fotoana, ny lisansa lisansa, ny tompon'andraikitra mpiandraikitra, toerana, haingana
Milalao miverina: Ny fanohanana dia miverina, rakitra voatahiry amin'ny fotoana sy ny ala
Hafainganam-pandeha: Fanohanana avy amin'ny 1 / 128 mankany 128
Pre-peo / lahatsoratra-peo: Famakiana mialoha ny horonam-peo 20 ary famoahana an-tsoratra
Deparpa: Tohano ny dewarp mba hahatonga ny sary ho marina sy azo antoka
Safe mode: Ilaina ny tenimiafina hiditra ny fametrahana na famerenana amin'ny fomba azo antoka
Rakibolana an-tsoratra: Fanohanana Ny firaketana rakitra, horonan-tsarimihetsika dia afaka atao amin'ny mpilalao manokana
hiditra: Mamepo ny herinaratra / fialana, mametraka fanovana, manomboka rakitsoratra, fanairana etc
hplayer: Mpilalao fanatanjahantena mpilalao, milalao cameras miara-milalao, dia afaka milalao ny rakitra miafina
CMSV6: Ampiasaina amin'ny modely 4G / 3G fotsiny ihany, fijerena ny fomba fijery mivantana / fivoahana / làlana ara-tantara
Miaro: Firmware dia afaka manavao na USB aza
Temperature: -40-60 ℃
Humidity: 40% ~ 80%
Time: miara-miasa amin'ny GPS, Internet, PC
Stream kely roa: Dingana roa samihafa ho an'ny horonantsary sy horonan-tsary mivantana amin'ny alalan'ny 4G / 3G
toerana misy anao: Afaka mametraka ny sehatra fanalahidy
Famantarana: Power, Record, Snap, rakitra Audio
Battery fahafahana: 1 pcs Azo soloina bateria, 2600mAh tsirairay, tazomy ny fitaovana NON-4G mandeha 8h eo ho eo, tohizo ny 4G fitaovana mihazakazaka manodidina ny 4.6h.
Fiatrehana ora: eo amin'ny 4h eo ho eo.
Bateria miverina: 60mA (Raha ilaina, mitazona fitaovana mihazakazaka mandritra ny famerenana ny bateria na ny batterie.)
Size: 88.3 * 59.8 * 34.4mm
BWC011 sarimihetsika video nalaina sary
4779 Total Views 1 Views Today